အာရဗီစာနှင့် အခြေခံ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းဆိုသည်မှာ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeအာရဗီစာနှင့် အခြေခံ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းဆိုသည်မှာ
အာရဗီစာနှင့် အခြေခံ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းဆိုသည်မှာ
ဧပြီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၇
အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ကလေးငယ်များ..(၅နှစ်မှ ၁၂နှစ် အရွယ်)များကို ဘုရားဝတ်ပြုတတ်အောင် သင်ကြားပေးသော နေရာဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်၊တရုတ်၊ အာဖရိကန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ တကမ္ဘာလုံးရှိ မွတ်စလင်မ်များ ဘုရားဝတ်ပြုသော အခါ.. အားလုံး အာရဗီဘာသာဖြင့် ရွတ်ဆို ဝတ်ပြုကြပါသည်။ ဥပမာ အခြားဘာသာဝင်များ လက်တင်ဘာသာ၊ ပါဠိဘာသာ၊ သက္ကရိုက်ဘာသာများဖြင့် ရွတ်ဆိုရှိခိုး ကန်တော့သလိုမျိုးဖြစ်ပါသည်။ လူအများစုက မိမိရွတ်ဆိုသည်ကို အပြည့်အဝ နားမလည်ကြပါ။
အချို့က အနည်းငယ် နားလည်ကြပါသည်။။ အချို့က လုံးဝ နားမလည်ကြပါ။
သို့သော်…ဘာစာရွတ်လျှင်.. ဦးညွတ်ရမည်… ဘာစာသားရွတ်ဆိုလျှင် မတ်တတ်ပြန်ရပ်ရမည်၊ ဘာစာသားရွတ်ဆိုလျှင်.. ဦးချ..ရမည်..စသဖြင့်… လူမျိုးမရွေး… အားလုံးတညီတညာတည်း… လုပ်ဆောင်နိုင်ကြရအောင်… ခလေးငယ်များကို သင်ကြားပြသရပါသည်။
ရွတ်ဆိုကြသည်မှာ.. ကျမ်းစာ၏ နောက်ဆုံးကဏ္ဍ(ကဏ္ဍ၃၀)မှ… စာများကို အများဆုံး ဖတ်ရွတ်ကြရပါသည်။ တပိုဒ်ခြင်းအားဖြင့် တိုတောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ မွတ်စလင်မ်တိုင်း ကျား/မ..မဟူ… ထိုနောက်ဆုံးကဏ္ဍ၏ စာပိုဒ်၁၀ပုဒ်ခန့်မျှ.. အလွတ်ကျက်မှတ်ရပါသည်။ ထိုမှသာ..ဝတ်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါသည်။
ကျမ်းစာကိုဖတ်တတ်ရန်..ကကြီး၊ ခခွေး..သဘော.. ဗျည်းများမှ စသင်ကြားလျှင်.. လူကြီးများအတွက်.. အမြန်စံနစ်ဖြင့်သင်လျှင်နာရီ၄၀ သင်ရိုးဖြင့်သင်ပေးကြပါသည်။ ကလေးများကိုတော့.. အချိန်များစွာပိုကြာအောင်သင်ရပါသည်။ ဦးစွာပဌမ.. ကျမ်းစားမဖတ်ခင်.. ခြေလက်မျက်နှာဆေးကြောခြင်း သင်ပေးရပါသည်။ ဘုရားဝတ်ပြုခါနီး ခြေလက်ဆေးကြော သန့်စင်ခြင်းနှင့်အတူတူပါ။ ရေသုံးအနည်းဆုံးနှင့် ဆေးကြော သန့်စင်သည့်ပုံစံ အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပါသည်။
တကမ္ဘာလုံးရှိ မွတ်စလင်မ် မှန်သမျှတပုံစံတည်း… ဆေးကြောသန့်စင် ပုံစံတူကြပါသည်။
ဥပမာ..ညာဖက်လက်ချောင်းလေးများနှင့် လက်ဖဝါးကိုစတင်ဆေး.. ထို့နောက်ဘယ်ဖက် လက်ချောင်းလေးများနှင့် လက်ဖဝါး…မှ အစချီ၍နောက်ဆုံး.. ဘယ်ဖက်ခြေဖျားနှင့် ခြေချောင်းလေးများကို ဆေးကြောအဆုံးသတ်ပါသည်။ Youtube တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်..။
အာရဗီကျောင်း အခြေခံဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းများက.. ယင်းသို့ခြေလက် မျက်နှာဆေးကြောသည်မှ အစပြု၍ ဘုရားဝတ်ပြုနိုင်အောင် ကျမ်းစာပါ အာရဗီစာများ ဖတ်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးပါသည်။
ကျမ်းစာတွင် ဘုရားဝတ်ပြုကြဟု ပါရှိသောလည်း… နေမထွက်ခင် အာရုံဦး၊ နေမွန်းလွဲချိန်၊ နေညိုချိန်၊ နေဝင်ပြီးစအချိန်၊ ညဉ်ဦးချိန် အစရှိသဖြင့် အချိန်များတွင်.. ဦးချဝတ်ပြုကြိမ်ရေ သတ်မှတ်ချက်များ အသေးစိတ်မပါရှိပါ။ .တမန်တော်၏ သမားစဉ်.. ထုံးတမ်းစဉ်လာများမှ လေ့လာလိုက်နာ၍ ကျင့်သုံးကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဝတ်ပြုချိန်ကို အတိအကျသိအောင်.. (ဥပမာ..နေထွက်ဆဲ… နေမွန်းတည့်ဆဲ.. နေဝင်ဆဲ.. အချိန်များတွင် ဝတ်ပြု၍လုံးဝ မရပါ).. ဝတ်ပြုစဉ်အတွင်း အကြိမ်ရေမည်မျှ ပျတ်ဝတ်ဦးချ..ရမည်..အစရှိသဖြင့်…ကလေးများကို သင်ကြားပေးရပါသည်။
ဝတ်ပြုရန် မတ်တပ်ရပ်စဉ်.. ခြေဖဝါး၂ဘက်မည်မျှ ကွာဝေးရမည်၊ လက်ပိုက်ထားလျှင် ဘယ်ဖက် လက်ကောက်ဝတ်အား ညာဖက်၏ လက်သန်းနှင့် လက်မတို့ဖြင့် ဆုပ်ပတ်ကိုင်ပြီး ကျန်လက်ချောင်း၃ချောင်းကို ဘယ်ဖက် လက်ဖျံရိုးပေါ် ဆန့်တန်းထားရမည်. အထိ..အတိအကျ… သေချာသင်ကြားပေးကြရပါသည်။
ဘုရားဝတ်ပြုတတ်ပြီးလျင်… လူသေကိုရေချိုးပေးခြင်း နည်းနာ၊ သဂြိုလ်ခြင်းနည်းနာ. အစရှိသဖြင့်.. မွေးကင်းစ ကလေးငယ် မွေးဖွားသည့်အခါ ဝတ်ပြုဖိတ်ခေါ်သံဖြင့်.. ဖိတ်ခေါ်သည်မှအစ… သေဆုံးသဂြိုလ်ပြီး.. သေသူအတွက် ဆုတောင်းသည်များအထိ… သင်ကြားပြသပေးကြရာပါသည်။
အသက်ရှင်နေစဉ်.. ဥပုသ်လအကြောင်း.. ဥပုသ်သီလ စောင့်ထိန်ပုံ… ဥပုသ်ဖြေပုံ.. အလှုအတန်းပြုလုပ်ပုံ… ဆင်းရဲသားများအတွက်. .. မလှုမနေရ… အလှူငွ..ပေးရခြင်း.. မည်မျှပေးရခြင်း.. မည်သူက အလှူခံပိုင်ခွင့် ရှိ/မရှိ… များမြောင်လှသော… ထုံးတမ်းစဉ်လာများကို.. သင်ကြားပေးရပါသည်။
များသောအားဖြင့်.. မနက် (သို့မဟုတ်) ညနေ.. ညပိုင်း.. ၂ နာရီခန့် နေ့စဉ် သင်ကြားပေးလေ့ရှိပါသည်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေရက်များ တွင်… ပိုမို အချိန်ယူ သင်ကြားပေးကြပါသည်။
အကျဉ်းအားဖြင့်… မွတ်စလငိမ်တို့အတွက်… အာရဗီစာသင်ကျောင်းများ.. ဘာအတွက်လိုအပ်သည်ကို.. အကြမ်းအားဖြင့် ရေးသားတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
← သာကေတ ကအစ္စလာမ် စာသင်ကျောင်းလေးကျောင်း ဘယ်လို ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသလဲ?
ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ လှုံဆော်နေသူများကို တားဆီးပေးရန် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချူပ်ကို စာပို့ခဲ့ →